Mogok Media: Star Ruby & Sapphire
မိုးကုတ်တွင်းထွက် အမာကျောက်မျက်များဖြစ်ကြသည့် ပတ္တမြားနှင့် နီလာတို့တွင် ဂေါ် (Silk) ဟုခေါ်သော အောင်းဝင်များ ပါတတ်ကြလေ့ရှိသည်။ ဤကျောက်များအား လုံးချောပုံစံဖြင့် သွေးယူလျှင် ပါရှိသည့် ဂေါ်များ အလင်းပြန်ပါက ကြိုး(၃)ချောင်း တစ်ခုကိုတစ်ခုဖြတ်ကာ ကြယ်ပုံစံဖြင့် ကြိုး(၆)ကြိုး ဖြာဆင်းနေသော ပုံများကို ရရှိပါသည်။ ၄င်းကျောက်များကို ဂေါ်ကြိုးကျောက်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဂေါ်ကြိုးကျောက်အကြောင်း ပြောပါက အမေရိကန်လူမျိုး အဲလ်ဘတ်ရမ်းဆေး(Albert Ramsay) အကြောင်းကို ချန်လှပ်ထားခဲ့၍ မရပေ။ ဂေါ်ကြိုးအစ ရမ်းဆေးက ဟု ဆိုရိုးပင် ရှေးက ရှိခဲ့သည်။ ပထမ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးစအချိန် ၁၉၂၃-ခုနှစ်လောက်က အမေရိကန်လူမျိုး အဲလ်ဘတ်ရမ်းဆေး ဆိုသူသည် မိုးကုတ်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ ထိုသူသည် ကျောက်ကုန်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ကျောက်သွေးပညာလည်း တတ်ကျွမ်း၏။ ထိုခေတ်က မိုးကုတ်ကျောက်မျက်ဈေးကွက်တွင် ဂေါ်ပါသော ကျောက်များအား တန်ဖိုးမထားတတ်ကြ၊ ဈေးကောင်းမရတတ်ကြပေ။ မစ္စတာရမ်းဆေးသည် ထိုကျောက်များကို ဒေသခံများထံမှ ၀ယ်ယူကာ ကြိုးပေါ်လာအောင် စမ်းသွေးကြည့်သည်။ ကျောက်များသည် ကြိုးပါသော်လည်း ထိုကြိုးအား ပုံစံကျနအောင် ပုံဖမ်းသွေးရသည်မှာ ပညာသားပါလှ၏။ ထိုသို့ စမ်းသွေးရင်းဖြင့် မစ္စတာရမ်းဆေးသည် ဂေါ်ကြိုးဖမ်းသွေးနည်း ကျွမ်းကျင်သွားပါသည်။ သွေးပြီးသည့် ထိုကျောက်မျက်များကို အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့ စမ်းသပ်တင်ပို့ရောင်းချကြည့်ရာ ဈေးကွက်တွင် တဖြည်းဖြည်း လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် မစ္စတာရမ်းဆေးသည် ဒေသခံများထံမှ ထိုကျောက်များအား ဈေးပေါပေါဖြင့် ၀ယ်ယူသွေးပြီးလျှင် အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့ ဈေးကြီးကြီးဖြင့် တင်ပို့ရောင်းချရာ အချိန်တိုအတွင်း ကြီးပွားချမ်းသာသွားခဲ့ပါသည်။ ထိုခေတ်က ဒေသခံတို့က ရမ်းဆေးအား ဂေါ်ကြိုးဗိုလ်ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ယခုခေတ်တွင်လည်း ဂေါ်ကြိုးဖမ်း ကျွမ်းကျင်သော ကျောက်သွေးဆရာများအား ဂေါ်ကြိုးဗိုလ် ဟု ခေါ်ဝေါ် ကြလေ့ရှိသည်။
ပတ္တမြားတွင် ဂေါ်ကြိုးပါပါက အနီဂေါ်ကြိုး (StarRuby)၊ နီလာတွင် ဂေါ်ကြိုးပါပါက နီလာဂေါ်ကြိုး (StarSapphire) ဟုခေါ်ကြသည်။ ဂေါ်ကြိုးပုံစံကျလျှင် ကျသလောက် ကျောက်မျက်ဈေးကွက်တွင် အကွက်ဖော်သွေးထားသော တာပလာများနည်းတူ ဈေးကောင်းရလျှက် ရှိပါသည်။
Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 5:24 PM
hello...mogok media family .
i want to see u r page vispassana medation history because now young are not understand buddha!
Now we are trying to post about Mogok vipassana in fully information. Thank you.
Hello mogok media family!Your blog is very good for us.Because I'm from mogok.I was born in there.In our native town,there are many authors who live in mgk.May I suggest your blog that you will find and to get their informations.Andthen to up- load their ideas.I'd like to read mogokepeople who live in mogok their artsworks,ideas,informations& so on.Thanks .
MogokPrince: Thankz4interesting and suggest our blog. There r little few of authors in mogok. But they were not inawork of author. What do u know about our town. We'll try in best.
ricky hua said...
thz for share, although was born at mogok, shift to mdy since 6yr. i dont know much about mogok. pls share many more about mogok...